မြန်မာ့အရေး တောင်ကိုရီးယားနဲ့ ဂျပန်အမတ်တွေ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေ — မြန်မာဌာန
မြန်မာ့အရေး တောင်ကိုရီးယားနဲ့ ဂျပန်အမတ်တွေ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေ
တောင်ကိုရီးယားလွှတ်တော်မှာ မနေ့က ကျင်းပတဲ့ အစည်းအဝေးကနေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချလိုက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ အပါအဝင် ဖမ်းဆီးထားသူတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဂျပန်လွှတ်တော် အမတ်တွေကလည်း မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားမယ်လို့ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ပြောဆိုခဲ့သလို သြစတေးလျရောက် မြန်မာတွေကလည်း ကင်ဘာာာမြို့ရှိ သြစတေးလျလွှတ်တော်ကို မနေ့က သွားရောက်ပြီး မြန်မာ့အရေးတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားလွှတ်တော်မှာ မနေ့က ကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးမှာ မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ၃ ခုကို လွှတ်တော်အမတ်တွေက တညီတညွတ် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူ ဦးရန်နိုင်ထွန်းက-
"စစ်တပ် အာဏာသိမ်းမှုကို ရှုတ်ချရန်၊ စစ်တပ်က ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ နဲ့ အရာရှိတွေ အားလုံးကို လွှတ်ပေးရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဘဝနဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ကာကွယ်ရန်ဆိုတဲ့ အဓိက ၃ ချက်ကို ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုရီးယားလွှတ်တော်အမတ်အားလုံးက CRPH ကို အပြည့်အဝ ထောက်ခံတယ်။၂ဝ၂ဝ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ကိုးရီယားအစိုးရက လုံးဝ အသိအမှတ် ပြုတယ်ဆိုတာ အတိအလင်း ပြောသွားပါတယ်။”
အဲဒီချမှတ်ချက်တွေကို ဒီနေ့ကျင်းပမယ့် တောင်ကိုရီးယား အမျိုးသားညီလာခံမှာ တင်ပြမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကို တရားစွဲဖို့ တောင်ကိုရီးယား ရှေ့နေတွေ စီစဉ်နေတာနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ဦးရန်နိုင်ထွန်း က-
“ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကို တရားစွဲဆိုဖို့ ကိုရီးယားလွှတ်တော်ထဲက ကိုရီးယားရှေ့နေများအဖွဲ့က စပြီးဆောင်ရွက်နေပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ တရားဥပဒေမဲ့ စစ်အာဏာသိမ်းမှု အပါအဝင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကို အကြမ်းဖက်နှိပ်ကွပ်တာတွေကို တရားစွဲဆိုဖို့ ကိုရီးယားက စီစဉ်နေတယ်။”
ဒီအတောအတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့ရောက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကလည်း အာဏာရပါတီ LDP က ဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Takashi Nagao တာကာရှီ နာကအို ကို ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာနိုင်ငံအရေး တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်အမတ်ခေါင်းဆောင် တာကာရှီ နာကအိုက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ CRPH ကို သူတို့ထောက်ခံတယ်၊ မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် သူတို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားမယ်၊ ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကို လက်မခံဖို့နဲ့ အရေးယူဖို့လွှတ်တော်မှာသူတင်ပြမယ်လို့ ပြောဆိုပြီး မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သူက ဗီဒီယိုနဲ့ အမှာစကားလည်း ပါးလိုက်ပါတယ်။
LDP ပါတီဒုတိယအတွင်းရေးမှူး တာကာရှီ နာကအိုရဲ့ ဗီဒီယိုက ပြောစကားတွေကို ကိုမျိုးကြီးက အခုလို ဘာသာပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ ခင်ဗျာ.... အခုအချိန်မှာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ စစ်မြေပြင်သဖွယ် ပင်ပန်းဆင်းရဲနေမယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တင်သာမက ဂျပန်နိုင်ငံ လွှတ်တော်အမတ်များနဲ့ ဂျပန်အစိုးရဟာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများရဲ့ ခံစားချက်တွေကို နားလည် သဘောပေါက်ပြီး မြန်မာပြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လွတ်လပ်မှုတွေကို တဖန်ပြန်လည် ရရှိနိုင်ဖို့ မြန်မာပြည်ကို စာနာထောက်ထားတဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပူးပေါင်းကာ သေချာပေါက် အစွမ်းကုန် ကူညီ ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုချိန်ထိ မြန်မာပြည်ဟာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ စစ်တပ်ရဲ့ အာဏာသိမ်းခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံး ဒီမိုကရေစီကို အရယူနိုင်မယ် ကြံကာမှ အချိန်တိုအတွင်း တခါပြန်ပြီး အခုလို အခြေအနေရောက်သွားရတဲ့အပေါ် မြန်မာပြည်သူအားလုံး ဘယ်လောက်တောင် ခံပြင်းလိုက်မလဲဆိုတာ ကျွန်တော် နားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခင်ဗျာ... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့အောင်လံတခုအနေနဲ့ သိပ်ပင်ပန်းနေလိမ့်မယ်လို့ ယူဆပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မြန်မာပြည်ကို ကမ္ဘာတဝှမ်းက အားပေးနေမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မယိုင်မနဲ့ဘဲ နောက်ဆုံးရဲ့ နောက်ဆုံးအထိ အားကုန်ထုတ် ကြိုးစား တိုက်ခိုက်သွားစေချင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ဂျပန်ရောက် မြန်မာတွေနဲ့ စကားတွေ အမျိုးမျိုး ပြောခဲ့ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစီအစဉ်ကျကျ ရလဒ်ကောင်းတခု ထွက်လာအောင် လုပ်ဆောင်သွားချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အတူတူ ကြိုးစားကြရအောင်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။”
ဒီအတောအတွင်း သြစတေးလျနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလည်း သြစတေးလျလွှတ်တော်ကို မနေ့က သွားရောက်ပြီး လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံကာ မြန်မာပြည်အရေး ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ စာတစောင် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာအဖွဲ့က တွေ့ဆုံခဲ့သူတဦးဖြစ်တဲ့ သြစတေးလျ လွှတ်တော်အမတ် Penny Wong ပင်နီဝေါင်းက မြန်မာပြည်က ဆန္ဒပြသူတွေကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုအတွက် အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်းနဲ့ သြစတေးလျအနေနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်ရမှာဖြစ်ကြောင်း တွစ်တာကနေ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
Save democracy and human right. Kindly stand with Myanmar people.
U Aung Kyi says:
ပြည်သူအများစု များစွာသွေးမြေကြမှု မလိုလားပါ။အာဏာနှင့်ဥပဒေမဲ့ အနိုင်ကျင့်သူများကိုငြိမ်းချမ်းစွာ အမြန်ဖြေရှင်းပေးရန် တောင်းပန်ပါ သည်။တရားမျှတသော ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် များစွာသီးခံကြရန် တိုက်တွန်း နိုးဇော်နေပါသည်။